Real madrid oo qorsheyneysa in 90 Million kusoo qaataan Halland. Horyaalka Spain
Chelsea iyo bayern Munchen kuma biiri doono Erling Haalan oo hadlay.
Home Horyaalka Spain Real madrid oo qorsheyneysa in 90 Million kusoo qaataan Halland.
Real madrid oo qorsheyneysa in 90 Million kusoo qaataan Halland.
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso 90 milyan euro oo ay ugu dhaqaaqeyso xiddiga kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland ka hor xilli ciyaareedka soo socda Haaland, oo 20 jir ah, waxaa bartilmaameedsanaya kooxaha ugu waa weyn Yurub ka dib markii ay dalabkooda usoo bandhigeen kooxda Bundesliga ka dhisan.
Real Madrid ayaa qorsheyneysa inay 90 milyan euro ugu dhaqaaqdo xiddiga reer Brazil ee Erling Haaland, sida ay sheegtay ABC Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda LaLiga ay isku dayi doonaan inay heshiiska qeyb la dhigaan Luka Jovic, oo amaah ku jooga Eintracht Frankfurt, ama Mariano Diaz heshiiska.
Haaland ayaa dhalisay 23 gool waana xidiga saftay kulamada ugu badan ee Dortmund xilli ciyaareedkan waxaa la arki doonaa halka uu ku dambeyn doono da’yarkaan tayada wanagsan Suuqa soo aadan.
Previous articlePep guardiola oo kala doortay midka wanaagsan Valdez, Neuer iyo Ederson.
Next articleRonald Koeman iyo Alba oo ka hadleen xaalada messi kahor kulanka habeen dambe ee PSG.
Qaar kamid ah garoomada kooxaha ingiriiska oo lagu ciyaari doono...
Wararka Ciyaaraha Maanta1892
Suuqa kala iibsiga735